Basa reCommunity manager nderei? | Kugadzira uye zvidzidzo
Maria Jose Roldan | 05/11/2021 11:54 | Jobho Kubuda
Zana remakore rechiXNUMX raunza, pakati pezvimwe zvinhu, kuwanda kwemasocial network. Mundima yebhizinesi, iwe unofanirwa kunge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge urwo. Kuti uite izvi, zvakakosha kuti mumwe munhu azvibate nenzira yakanakisa uye ndipo panopinda nhamba yemaneja weCommunitiy.
Iri ibasa riri kuwedzera kudiwa uye rine musoro wakazara, sezvo zviito zvaro zvakasiyana zvinoenderana nekuti imwe kambani inozivikanwa pane network yese. Muchinyorwa chinotevera tichataura newe zvakadzama nezve nhamba yeCommunity maneja uye ndeapi mabasa ayo makuru.
1 Chii chinonzi community manager
2 Mabasa makuru eCommunity maneja
3 Ndeupi hunyanzvi hunofanirwa kuve nemutungamiriri weCommunity akanaka
Chii chinonzi community manager
Iyo communitiy maneja inyanzvi inyanzvi mukushambadzira kwedhijitari ine basa guru rekugadzira uye kutonga nharaunda yesocial network yeimwe mhando kana chigadzirwa. Maneja wenharaunda saka anogona kutorwa semaneja kana nyanzvi mumasocial network uye munhu mukuru anotarisira kudzivirira imwe mhando painternet.
Mabasa makuru eCommunity maneja
Basa rekutanga remaneja wenharaunda kugadzira nekugadzirisa mamwe maprofile ekambani yavari kushandira. Izvo zvakakosha kuti nyanzvi yati izive zvese hunhu hwechinzvimbo chakataurwa sezvo iye ari kutungamira kushambadzira yakataurwa mhando pamasocial network. Gadzira zvirimo kuitira kuti vanhu vakasiyana vari kusefa painternet vagone kupindirana nazvo.
Basa rechipiri remukuru wenharaunda ndeyekutsvaga nguva dzese kukanganisa kwechiratidzo chainomiririra pasocial network. Nenzira imwecheteyo, ndiye ane basa rekupindura mibvunzo iyo vashandisi veInternet vangave nayo nezvekambani. Nekune rimwe divi, ibasa remaneja wenharaunda kugara uchifambidzana nezvese zvakatenderedza mhando mundima yeInternet.
Basa rechitatu nderekubatsira nharaunda kukura mumambure. Kune izvi zvakakosha kuti iwe uwirirane zuva nezuva nevamwe vanhu, gadziridza mastatus uye nyaya kuitira kuti mhando yaunomiririra iri pamusoro uye mune vogue yevose. Vanofanira kuona kuti nharaunda yevashandisi yakatenderedza kambani inokura muhuwandu uye mhando.
Basa rechina nderekusimudzira zvese zvirimo izvo brand inokwanisa kugadzira kuburikidza nesocial network. Neizvi, zvinokwanisika kuwana vatengi vatsva uye nekudaro kuwedzera nharaunda yevashandisi vanotevera yakataurwa mhando. Mashoko anoratidzwa nguva dzose anofanira kuva akakodzera uye anokosha sezvinobvira.
Basa rekupedzisira rinenge riri rekudyidzana nevashandisi uye kutora chikamu muhurukuro dzakasiyana. Ndiyo mumiriri wechiratidzo mumunda wesocial network. Iwe unofanirwa kuziva kugadzirisa chero rudzi rwedambudziko kana dambudziko rinogona kumuka uye kuita kuti munhu wese afare. Izvo zvakakosha kuti uchengete vatengi vakasiyana vachifara kuitira kuti kukosha kweiyo brand kuve kwakanyanya kunogoneka mumatiweki akasiyana.
Ndeupi hunyanzvi hunofanirwa kuve nemutungamiriri weCommunity akanaka
Nyanzvi yakanaka yakazvipira kusimudzira basa reCommunity maneja anofanira kunge aine akati wandei hunyanzvi:
Iva nemoyo murefu sezvo zvese hazvisi kuzonaka mubasa iri. Zvakajairika kuti mukati menharaunda ugamuchire zvichemo uye zvirevo zvisina kunaka kubva kune vakasiyana vashandisi, izvo zvaunofanirwa kugadzirisa kubva mukugadzikana uye kudzikama maitiro.
Anofanira kuva munhu ane nzira kuti uve nehunyanzvi sezvinobvira mubasa raunoita.
Unofanira kuziva kuteerera sezvo izvi zvinoenderana nekuti iwe unogona kugadzirisa huwandu hwakawanda hwezvinetso zvaunosangana nazvo zuva nezuva.
Iva nyanzvi inoziva zvaari kuita nguva dzese. Nokuda kweizvi zvakakosha kuti ugamuchire kudzidziswa kwakanakisisa kunobvira.
Iwe unofanirwa kunge uri munhu anoshanda ari kufambidzana nezvese nhau uye maitiro, kuitira kuti mucherechedzo wainomiririra urambe uri pamusoro kana zvasvika kumasocial network.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Basa reCommunity manager nderei?
Chii chaunofanira kudzidza kuti uve mutori wenhau?